OBI dị anyị ụtọ maka otú Jehova si na-eme ka ọtụtụ ndị na-abata ná nzukọ ya n’ike n’ike n’ụwa niile. (Aịza. 60:22) Ọ bụ ya mere e ji na-achọkwu ọtụtụ Ụlọ Nzukọ Alaeze. N’ụwa niile, Ụlọ Nzukọ Alaeze ndị a ka ga-arụ arụ na ndị a ga-arụzigharị arụzigharị karịrị puku iri na atọ.
Ka e nwee ike ịna-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ndị a ngwa ngwa otú na-agaghị efu oké ego, Òtù Na-achị Isi na-agbanwe ọtụtụ ihe na ngalaba dị iche iche na-ahụ maka ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze. Otu ngalaba e hiwere ọhụrụ n’isi ụlọ ọrụ anyị dị na Bruklin, dị na Niu Yọk na-arụsi ọrụ ike na-ahazi otú a ga-esi na-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’ụwa niile, na-ekpebikwa ndị a ga-ebu ụzọ rụọ ma ọ bụ rụzigharịa nakwa otú a ga-esi rụọ ha ngwa ngwa. Ihe a na-akpọ ngalaba a bụ Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze n’Ụwa Niile. Ma, Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze ná Mpaghara Dị Iche Iche n’Ụwa, bụ́ ndị e nwere n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Sentral Yurop, Saụt Afrịka, nakwa n’Amerịka na Ọstreleshia, na-ahụ maka Ụlọ Nzukọ Alaeze ndị a na-arụ ná mba ndị ha na-elekọta. Ihe ha na-elekwasị anya bụ ịhụ na a rụrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ngwa ngwa nakwa otú ọ na-agaghị efu nnukwu ego. Ha na-akụziri ụmụnna ndị nọ ná mba ebe ha na-elekọta otú ha ga-esi na-arụzi ụlọ ndị nzukọ Jehova nwe n’ógbè ha. N’alaka ụlọ ọrụ ọ bụla, e nwere Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ọ bụ ha na-ahụ maka ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze na Ụlọ Mgbakọ, na-ahụkwa maka ịrụzi ihe ndị mebiri na ha.
N’ọnwa Jenụwarị afọ 2015, ndị okenye niile nọ́ n’Amerịka ji vidio ha ji na-ahụ onye ọ bụla chọrọ ikwu okwu nwee nnọkọ. Ná nnọkọ ahụ, a kọwaara ha ụzọ ọhụrụ a ga-esizi na-ahazi maka ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze, otú a ga-esi na-arụ ya, na-elekọta ya, ma na-arụzi ihe ndị mebiri na ya. Lee ihe ndị a kọwaara ha:
Ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze: Otú a ga-esi arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ga-abụ otú e si arụ ụlọ n’obodo a chọrọ ịrụ ya. Ọ ga-abụkwa ihe ndị obodo ahụ na-eji arụ ụlọ ka a ga-eji rụọ ya. A rụwa ya, a ga-eji ntụziaka Kọmitii Mbipụta nke Òtù Na-achị Isi nyere, rụọ ya. A ga-arụ ya otú ọ na-agaghị efu oké ego ilekọta. A ga-arụkwa ya ka o sie ike, maa mma, gharakwa ifu oké ego.
Ilekọta Ụlọ Nzukọ Alaeze na Ịrụzi Ya: A bịa n’ọgbakọ ọ bụla, a ga-akụziri ụmụnna anyị ndị wepụtara onwe ha inye aka otú ha ga-esi na-elekọta Ụlọ Nzukọ Alaeze ha ka ọ ghara imebi ngwa ngwa.
N’eziokwu, Ụlọ Nzukọ Alaeze na Ụlọ Mgbakọ ndị a ga-arụ arụ na ndị a ga-arụzigharị arụzigharị dị ọtụtụ. Ọrụ dị na ha abụghịkwa obere ihe. Ma ọ bụrụ na ụmụnna agbakọọ aka n’ịrụ ọrụ a, ọ ga-eme ka a rụọ ha ngwa ngwa, ya agharakwa ifu oké ego.
ỤLỌ NDỊ ANYỊ NA-ARỤ
Ndịàmà Jehova Na-eji Otu Obi Arụ Ọrụ
Ndị Jehova na-eji otu obi arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze na ụlọ ndị ọzọ ha nwe n’agbanyeghị obodo ha si, omenala ha, na asụsụ ha. Ọ na-ewetakwara Jehova otuto.